Dowladda Farmaajo Dib Ma Usoo Celin doontaa Garoonka iy dekadda Muqdisho?.
Tuesday February 14, 2017 - 10:47:07 in Wararka by Super Admin
Max'med Cabdullaahi Farmaajo ayaa khudbaddii ugu dambeysay ee uu jeediyay ka hor intii aan madaxweyne loo dooran wuxuu ku sheegay in ilaha dhaqaalaha dalka Soomaaliya uu ka qaadayo dowladaha shisheeye ee gacanta ku haaya.
Dekadda Muqdisho waxaa maamusha shirkad Turkiga laga leeyahay
Farmaajo ayaa ballan qaaday in uu shaqo abuur usameyn doono kumanaan qof oo ku shaqa beelay la wareegistii garoonka diyaaradaha Muqdisho iyo dekadda caalamiga ah ay la wareegtay shirkadda Albeyrak ee laga leeyahay wadanka Turkiga.
Dad badan ayaa aaminsan in xukuumadda Farmaajo aysan waxbadan dhaami doonin maamulkii Xasan Gurguurte ee dowladaha shisheeye kula saaxiibtay dhaqaalaha Shacabka Soomaaliyeed haddii aysan dalka ka Eryin shirkadaha Turkiga ee boobka ku haaya kheyraadka dalka.
Dad badan ayaa ka niyad jabay maamulka Farmaajo kadib markii uu kulankiisi ugu horreyay laqaatay Safiirka Turkiga ee Soomaaliya iyo Jeneraal Gabre oo taliye u ah ciidanka Itoobiya ee gumeysiga ku jooga dalka Soomaaliya.
Kumanaan qof oo u badan xoogsatadii dekadda Muqdisho ayaa maanta dhigay dibad baxyo ballaaran oo ka dhan ah shirkadda Albeyrak.
Dibad baxayaasha ayaa codsanayay in shirkadaha Turkiga laga eryo dalka Soomaaliya islamarkaana lamaxkamadeeyo mas’uuliyiinta shirkadahaasi oo ku eedaysan in ay boobeen kheyraadkii dalka.
Dhagayso Qeybta 2-aad: Sideen usoo dhoweynaa Bisha Barakeysan Ee Ramadaan.